Le eziluncedo market kunye amathuba KOOWHEEL hoverboard K8 - Jomo Technology Co., Ltd
Le eziluncedo market kunye amathuba KOOWHEEL hoverboard K8
1. Imeko Uphuhliso self balancing isithuthuthu
2. Ukugcina imarike yemoto eseleyo.
3. eziluncedo market K8 namathemba
Kwiminyaka yakutshanje, kunye nokuphuculwa ngesifo sephepha, izithuthi amandla amatsha - iimoto eseleyo zathandwa ngabathengi basekhaya angaphandle sokukhuselwa zemvelo, iimpawu zoqoqosho lula, abathengi kuzuza ngokuphuculwa imfuno zothutho, imarike aphesheya inkulu, ithemba uphuhliso kulindeleke. Ukususela ushishino kwihlabathi elitsha isithuthi amandla, imoto elungeleleneyo, imoto smart iza kuba lolukhulu uphuhliso lwexesha elizayo. China lizwe kunye imveliso inkulu kunye nokuthunyelwa kumazwe angaphandle self ukulingana scooter sombane ehlabathini, olubalelwa 90% ye-Global Intsalela kushishino isithuthuthu. Noko ke, ngenxa yokunqongophala nemimiselo echaphazelekayo zasekhaya kunye nemigangatho, umenzi scooter electric kuyilo imveliso inkqubo yokuvelisa ngaphandle ukhokelo umgangatho, ukungabikho kweliso, neziphumo umgangatho imveliso hayi kuqinisekiswa, imarike njengezihloko, lo copycat, imarike igcwale iimveliso fake kunye abangenabuchule, abathengi abakwazi ukubona umgangatho kwimveliso. Amalungelo kunye nomdla osemthethweni akukho qinisekisa, ubungozi kukhuseleko Product bakaThixo kwesifo ebanzi kunyaka odlulileyo, usondeze iilahleko ezinkulu kubathengi, yaye nzulu angabanjezelwa ezithunyelwa intsalela scooter zombane ngayo.
Nokusinda, umgangatho elungileyo nexoxo nokugcina uphuhliso okunempilo imoto balance
Ishishini kufuneka amashishini avelisa iimveliso umgangatho, yaye abasebenzisi kufuneka amashishini oluya kwenza ukuba kuphuculeke ukhuseleko. Kuba shishino imoto intsalela nangoku ezinamagingxigingxi, amashishini kufuneka ujongane nale mibandela kushishino, Ukucingisisisa okwenziweyo bafune utshintsho kunye akwenza, ukuba umgangatho imveliso njengoko yokuqala ngokutsha imithetho shishino, kwaye ngokudibeneyo ukudala indawo evumayo ukhuphiswano emarikeni kolu shishino phantsi imigangatho engqongqo yokhuseleko. Ngenxa ishushu 6.5 intshi eqhelekileyo scooter self balancing bethengisa imoto balance emarikeni. Kwelinye icala, lo isikali icandelo uyandla ngokukhawuleza, kodwa kwelinye icala ukhuphiswano bedidekile. "A esisiqu ngaphakathi kwizifundo ichaza ukuba yintatheli. Ngenxa yokungabikho kwemigangatho, ezinye isithuthuthu imali yombane abavelisi basebenzisa amacandelo ophantsi, ibandla ezimbini kunye nezinye iindlela zokunciphisa iindleko, asikokuzibaxa ukuba uthi, olu khuphiswano ukhohlakeleyo unakho ukwenza yonke le ngokukhawuleza ukubuyela zero, oku ikhulu elinamanci billion yuan itotali yesayizi yemakethi ushishino yemoto lomncono baya kujamelana basengozini enkulu.
Indlela ukuphelisa izitshabalalisi ngezi kumashishini nokugcina impilo ishishini imoto ukulingana olungileyo, ubuchwepheshe bethu KOOWHEEL ukusuka wamisa nje ukuza kuthi ga ngoku sele ukunamathela umgangatho nokhuseleko kuqala, ukuphumeza iingozi zero, ukunikezela ngesibambiso ukhuseleko kwabathengi. Indlela ukhuphiswano kunye 6.5 intshi hoverboar obuphantsi kwi kwimarike, nokusinda zochuku ezilithoba liyazigxumela asibi saba sinethemba kulimo iimodeli intshi 6.5, kodwa ukhetho ifoun kunye ezintsha, ukunika abathengi uyilo 6.5 intshi K8 omtsha isithuthuthu imali yombane ukukhawulelana nemfuno market iya kuba iindleko eziphezulu ukubuyisela eqhelekileyo 6.5 intshi kwakungekho ukufana embalini.
eziluncedo market K8 namathemba
1. iimveliso model zabucala.
Yayilwa yi Italy Milan, imbonakalo epholileyo unique, isakhiwo ekhethekileyo umgaqo, wayekholiswa ngabathengi yaseYurophu American. Yaphula ukubonakala endala ndawaphula nezithintelo yolwaphulo- mthetho patent
2. PCB Taotao system ezimbini
Lamkela inkqubo motherboard ezimbini evela kwinkampani inzululwazi nobuchwepheshe Taotao. Xa kuthelekiswa imarike cheap brand-igama inkqubo motherboard, Taotao uye uzinzo olungcono kwindlela ezimbini, kunikela ekukhuseleni ukhuseleko lobuqu lwabasebenzisi.
Taotao Tech: 1, PC, eziphambili, ibhodi, kunye, 2pcs, gyroscopes.
Okokuqala-class umgangatho imoto e Hong Hong Motors na iingenelo siqinisekiso umgangatho, abakhwela anencasa akukho ingxolo.
uhlobo Power pack ibhetri, ubomi obude. Koowheel K8 usebenzisa 14 amandla okusindisa core 24V ibhetri zasekhaya kunye Imiqulu amandla ebhetri, ubomi elide kunye nokhuseleko emlilweni, ivavanywe, baleka kude kuyaphi kunezixhobo imarike 36V balance isithuthuthu, amandla enkulu!
Umqulu Ibhetri wenziwe impahla engangenwa, kwaye ikhuseleke ngaphezu iphakheji ethambileyo esetyenziswa yi koogxa
5. iintambo Hand
Ekubeni uhlobo umlobothi intambo eziphathwayo, oko zimpahla, ezintle lula, kwaye owned, xa kuthelekiswa ne eqhelekileyo 6.5 intshi isithuthi elungeleleneyo. Kulula ukuba baphathe kungekho isikhwama
inzuzo 6. inani
ixesha Post: Aug-15-2017